Kiraro fingotra loko roa hany tsindrona koronosy milina - China kiraro fingotra loko roa hany tsindrona koronosy milina Supplier,Factory -LARY
Home » Products » Fingotra hany tsindrona koronosy milina
Kiraro fingotra loko roa hany tsindrona koronosy milina
professinal ny kiraro fingotra hany tsindrona milina
NO. Miara-miasa Stations
Fanafanana Plate Size
Min hamolavola Haavo
Max tsindrona Volume
1000l / sm³
Ningbo seranan-tsambo,Shanghai seranan-tsambo
Fifandonan'ny planeta-baovao sy ela eo amin'ny fomba fiasa
Ny teknolojia farany VOKATRY NY avo lenta
MANATREHA FIVORIANA kalitao avo NY LALÀN'I
By tsindrona dingana, ny kiraro faladianao dia hanana fanamiana hakitroky sy ny hateviny, fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra farany
Mahafeno ireo fepetra AVY HIGH-END mpanjifa
Soft tsindrona hanitatra ny fiainana ho faty, Mety amin'ny tena ara-nofo isan-karazany fingotra tsindrona, ary afaka afangaro fitaovana hafa.
Rehefa mialoha fampiasana Manisika teny amin'ny loko isan-karazany, tsindrona loko tokana milina dia hanafoana ny mihoatra ny 95% ny loko fampifangaroana. Hahatratra ny fenitra ambony ny kalitao takiana. Ary rehefa mialoha fampiasana Manisika endrika miaraka amin'ny, na amin'ny alalan'ny loko roa ny tsindrona dia afaka mamokatra milina be pitsiny avo loko Mix.
Fotoana izao hanova!
Ny tsindrona koronosy milina mandeha ho azy no tena famokarana, Esory ny mandreraka tanana nentim-paharazana vulcanizing fiasan'ny milina, ny fikatsahana avo lenta, avo fahombiazana, hitsena ny fitakiana ny haingana ny famokarana, izao no andro mampiasa ny teknolojia vaovao, Lary mampiasa tsindrona fingotra faladianao milina !
Te hanangana ny PERFECT kiraro irery
Amin'ny alalan'ny tsindrona LARY milina, Ho afaka mampiasa fitaovana isan-karazany, loko, lamina, dia afaka hamita ny famokarana avo takina ny olana araka ny endrika isan-karazany, Mamorona tsirairay tsiroaroa ny faladianao izay dia afaka maneho tanteraka ny fepetra faran'izay tsara, manome ny hatsarany tsy manam-paharoa.
Multi-loko koronosy teknolojia,
endrika mety afaka amin'ny loko voafetra
Ahena Flash bebe kokoa ny fako
Fa sarotra bobongolo
Mba hanehoana bebe kokoa antsipirihany lamina
More fametrahana mazava tsara
Mety fiteny maro samy hafa fingotra
More mazava loko samy hafa eo amin'ny sisin'ny
Mba hampisehoana ny toetra antsipirihany
Isika dia manao izay tsara indrindra vitantsika
izahay miezaka hampihena ny efitra tsirairay fingotra tsindrona tifitra, na dia ny fotsiny 1 gram !
Miezaka ny fanasitranana hanafohezany ilay fotoana isan-bisikileta, na dia fotsiny 1 faharoa !
Fitsipika ambony rafitra fanaraha-maso
Amin'ny lehilahy tsotra interface tsara milina, Afaka hametraka mialoha ny fotoana fanasitranana,fanasitranana ny fotoana, tsindrona boky, preheating hafanana, Malefaka fanasitranana mari-pana, degassing fotoana, sy ny masontsivana hafa na oviana na oviana.
Tsiny aretina rafitra, mora ny hitarika fikojakojana manokana mba hamaha ny olana ao anatin'ny fotoana fohy indrindra.
IZAO NY LARY
Ningbo Lary Industry Teknolojia Co., Ltd dia mifantoka amin'ny orinasa teknolojia, iorenan'ny Portiogaly TECNIROLO Engenharia Industrial SA orinasa ao Shina.
Nandova ny foto-kevitra tsara indrindra mba hanome tolotra izay ny foibe (TECNIROLO) manana manompo mpanjifa any Eoropa noho ny roa-polo taona mahery, Lary orinasa hampiely nanao kiraro orinasa teknolojia sy ny milina, ary hanome ny tsara indrindra mpanjifa amin'ny tolotra injeniera. Current vokatra sy ny teknolojia mitondra any Shina ahitana indrindra: LRS165 Single fingotra loko faladianao tsindrona manokana koronosy milina, LRS165II Double-loko (2 akora) fingotra faladianao manokana tsindrona koronosy milina, 3 to 6 loko / 2 tny3 stations plastika tsindrona milina (PVC, TR, TPU…),, 3D footware famolavolana rindrambaiko, sns.
SY SERVICE NETWORK
In 20 taona ny tsena Eoropeana service tantara, indrindra mifantoka amin'ny plastika sy ny kiraro Lasitra orinasa
Vahaolana ho an'ny orinasa kiraro milina, rindrambaiko asa ara-teknika sy ny varotra ao amin'ny tsena any Amerika Atsimo
Production sy ny fivarotana tena automated ny kiraro fingotra sy plastika koronosy milina,kiraro rindrambaiko fanompoana ara-teknika
New famolavolana ankizy kiraro irery
Soccer kiraro hany in Europ
ODM orinasa ho an'ny baolina kitra endrika vaovao kiraro irery